धनी बन्न् मन छ ? ज्योतिषशास्त्रका यी सात उपाय अपनाउँनुहोस् – Khabar Chautari
धनी बन्न् मन छ ? ज्योतिषशास्त्रका यी सात उपाय अपनाउँनुहोस्
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष २०, २०७७ समय: ५:३४:१२
रोगबाट मुक्ति मिल्ने :वास्तु शास्त्रका अनुसार हरेक दिन तावामा रोटी पकाउनु वा सेक्नु अगाडि दूधको छिटा पार्नुहोस् । यसो गरे घरमा बिरामीको प्रकोप कम हुनेछ । आरोग्य सुख प्राप्त हुनेछ ।घरमा हुनेछ आर्थिक वृद्धि:हरेक बिहीबार तुलसीको बोटमा थोरै दूध चढाउनाले घरमा लक्ष्मीको स्थायी बास हुनेछ । बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारको अवसर खुल्ने छ । यस्तै घरमा आर्थिक सम्पन्ताको वृद्धि हुनेछ ।घरमा परिवारका सदस्यबीच बढ्ने छ प्रेम:घर परिवारका सदस्यबीच कलह तथा झगडा हुँदै आएको छ ? साथै घरको सबै तिर नकारात्मकता देखिन्छ भने नुन पानीले पूरै घरमा पोछा लगाउनु पर्दछ । वास्तुशास्त्रका अनुसार यो उपाय गर्नाले घरमा सकारात्मक उर्जाको सञ्चार हुनेछ । साथै घरका सदस्यहरुबीच प्रेम तथा आपसी सौहार्द पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
सुख–शान्तिको हुनेछ बास:हरेक दिन शिव लिंगमा जलमा थोरै दूध मिलाएर अभिषेक गर्नुहोस् र थोरै पानी उभार्नुहोस् । त्यसपछि मुख्य द्वार अर्थात ढोकाको दुवैतर्फ उक्त दूध चढाउनुहोस् । ज्योतिषका अनुसार यसो गरेमा घरमा सुख–शान्तिको बास हुनेछ । साथै सकारात्मक उर्जा आउने छ ।मनोकामना पूरा हुनेछ:हरेक दिन साँझको समयमा पिपलको बोटमा पानी चढाउनुहोस् । यसो गर्दा पानीमा थोरै दूध पनि मिसाउन नर्बिसनु होला । यसपछि दीपक जलाउनु होस् र आफ्नो मनोकामना सम्झदैँ पाँच पटक परिक्रममा गर्नुहोस् । यसो गरेमा आफ्नो मनोकामना चाँडै पूरा हुनेछ ।
पितृदोषबाट मिल्ने छ मुक्ति:हरेक दिन बिहान सबैभन्दा पहिलो खाना गाई माताका लागि तयार गरेर खान दिनुहोस् । त्यसपछि कुकुर र तेस्रोमा छतमा पंक्षीका लागि खाना राखिदिनुहोस् । यसो गरेमा पितृदोषबाट मुक्ति मिल्ने छ । साथै पितृदोषको कारण प्राप्त कष्ट समाप्त हुनेछ । घरमा सुख, शान्ति पनि फिर्ता आउने छ ।नकारात्मक प्रभावको हुने छ कमी:कुनै पनि दिन चार घडीमा पाँच किलो शुद्ध नुन एक थैलीमा राखेर घरको यस्तो स्थानमा राख्नुहोस्, जहाँ पानीले नभेट्टाओस् । यदि आफै थैलीमा पानीले भेट्टायो र भिज्यो भने पनि उक्त नुन प्रयोग नगर्नुहोस् । त्यसलाई फालिदिनुहोस् । यसपछि फेरि त्यसै गरी नयाँ नुन ल्याएर राख्नुहोस् । यसले घरको सबै नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने छ । र, सकारात्मक प्रभावलाई बढाउने छ ।
काठमाडाैं, पुष । कोभिड १९ को कारणले १० महिनादेखि ठप्प भएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइन्सेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा एक साताभित्रै खुल्ने भएको छ।यातायात व्यवस्था विभागले पुसको दोस्रो सातादेखि १० महिनादेखि ठप्प भएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु गर्न लागेको हो।*** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
नेपालमा भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटक (सामाजिक सञ्जाल) का प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसको दुरूपयोग पनि बाक्लिएको पाइएको छ। रमाइलो गर्ने र भाइरल हुने बहानामा केही व्यक्तिले जथाभाबी भिडियो बनाएर ‘अपलोड’ गर्दा व्यक्तिगत र संगठनात्मक गोपनीयता उदांगो भइरहेको प्रहरीको ठहर छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार कार्यालयभित्रै भिडियो बनाउने, बैंकका कर्मचारीले फाइल, पैसा र डकुमेन्टजस्ता सामग्री भिडियोमार्फत सार्वजनिक गर्ने, प्रहरी र नेपाली सेनाको बर्दीको प्रयोग गर्ने, ड्युटीमै भिडियो बनाउने, चित्त नबुझेका व्यक्तिको अश्लील भिडियो अपलोड गरिदिने प्रवृत्ति बढेको
छब्युरोका एसपी पशुपति रायका अनुसार साइबर अपराधमा आगो थप्ने काम टिकटकले पनि गरिरहेको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल र युट्युब च्यानललाई व्यस्थित गर्न सकिने आवश्यक कानुन निर्माण नगरेका कारण प्रहरीको टाउको दुखेको छ। एसपी रायले टिकटकबाटै गोपनीयता भंगमात्र होइन, ठगीसमेत हुन थालेपछि प्रहरीले प्रयोगकर्तामाथि निगरानी बढाएको बताए। उनले कोहीप्रति प्रतिशोध राखी वा जानाजान चारित्रिक ठेस पु¥याउनेलाई प्रहरीले कारबाही गरेको जानकारी दिए। ‘जानेर वा नजानेर प्रयोगकर्ताले यसको दुरूपयोग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बाटोमै पनि अ’भद्र व्य’वहार गर्ने, रेकर्डेड कुरा बाहिर ल्याउने, चरित्र ह त्या गर्ने, गो’प्य कुराको खुलासा गरिदिने, टिकटक बनाउनकै लागि अनावश्यक उटपट्याङ गर्नेजस्ता गलत प्रयोग भएको तथ्य हामीले फेला पारेका छौं।’
टिकटकबाटै हिंसा भइरहेको भन्दै ब्युरोमा उजुरी दिन पुग्ने महिलाको संख्या पनि बढेको छ। सामाजिक सञ्जालको जन्जालमा फस्दा केही व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र व्यक्तिगत रूपमा चोट पुग्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट ठगिएकाबाट एक सातामा ५० वटाको हाराहारीमा उजुरी ब्युरोमा दर्ता हुन्छन्। उजुरीका आधारमा प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तथा व्यक्तिको आइडी ब्लक गरिदिनेजस्ता उपचार गर्दै आएको छ।एसपी रायका अनुसार सरकारी कर्मचारीले समेत कार्यालयमा काम गर्दैगर्दा टिकटक बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। प्रयोगकर्ताले लामो भिडियो वा अडियोलाई इडिट तथा ‘कट’ गरी टिकटकमा अपलोड गर्छन्। कतिपयले एकथरी भिडियोमा अर्को अडियो प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। ड्युटीमै अनाश्यक भिडियो बनाएको जानकारीका आधारमा १० जनाभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गरेको ब्युरोले जनाएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाले पनि पोसाकको दुरूपयोग नगर्न लिखित निर्देशन दिइसकेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा शिवहरि घिमिरेले लेखेका छन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******